Carl Henry Global - Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee GDPR iyo Adeegsiga cookie
Waxaan kaa soo aruurineynaa macluumaadka markaad iska diiwaangelisid boggayaga, adoo amar ku bixiya, inaad u qorto wargeyskayaga, buuxi foomka ama Baakadaha ku rid alaabta aad iibsaneyso.
Marka amro ama diiwaan on our site, sida ku haboon, waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo in aad geli: Magaca, cinwaanka e-mail, cinwaanka boostada ama lambarka taleefanka. Waxaa laga yaabaa inaad, Si kastaba ha ahaatee, booqo goobta si qarsoodi ah.
Google, oo ah iibiyaha qaybta sadexaad, wuxuu isticmaalaa "cookies" si uu ugu adeego xayeysiisyada boggaaga. Isticmaalka Google ee Cookie-ka DART wuxuu awood u leeyahay inuu u adeego xayeysiinta dadka isticmaala iyadoo ku saleysan booqashadooda boggagaaga iyo goobaha kale ee internetka. Isticmaalayaasha ayaa laga yaabaa inay ka-reebaan isticmaalka xogta "DART" adigoo soo booqda xayeysiiska Google iyo nadaamka shuruucda marxaladda asturnaanta.
Si aad u habeysid khibradaada - (macluumaadkaaga ayaa naga caawiya inaan si fiican uga jawaabno baahiyahaaga shakhsiyeed)
Si loo hagaajiyo boggayaga internetka - waxaan si joogta ah ugu dadaalnaa inaan horumarinno bixinnada internetka ee ku saleysan macluumaadka iyo jawaab celinta aan kaa helno
Si loo hagaajiyo adeegga macaamiisha - Macluumaadkaaga ayaa naga caawiya inaan si waxtar leh uga jawaabno codsiyada adeegga macaamiisha iyo baahiyaha taageerada
Si loola shaqeeyo muqaalka - Macluumaadkaaga, ha ahaato mid guud ama mid gaar ah, laguma iibin doono, beddeli karo, laguma wareejin doono, ama laguma siinayo shirkad kale sabab kasta ha ahaato, iyada oo aan lagaa ogolaanin, marka laga reebo ujeedada dhabta ah ee bixinta alaabta ama adeegga la soo iibsaday.
Si loo maamulo dalabkeena - tartan, dallacsiinta, sahaminta ama muuqaal kale oo goobta ah
Si aad u soo dirto emails Periodic - Cinwaanka emailka ee aad bixisid nidaamka nidaamka, waxaa loo isticmaali karaa in laguu soo diro macluumaadka iyo cusbooneysiinta ku saabsan amarkaaga, marka lagu daro helitaanka wararka warka mararka qaarkood, cusbooneysiinta, macluumaadka la xiriira alaabta ama macluumaadka adeegga, iwm.
Waxaan fulinnaa tallaabooyin kala duwan oo amniga ah si aan u ilaalino amniga macluumaadkaaga shakhsiyeed markaad amar gasho ama aad gashid, soo gudbiso, ama aad hesho macluumaadkaaga shakhsiyeed.
Kadib markaad macaamil ganacsi ah, macluumaadkaaga gaarka ah (kaararka deynta, lambarada amniga bulshada, dhaqaalaha, iwm) lama kaydin doono xafiisyadayada.
Haa, Kukiyada waa faylasha yaryar oo ah goobta ama adeeg bixiyuhu u wareejiyo kombiyuutarkaaga adoo maraya shabakada internetka (haddii aad ogolaato) taas oo u sahlaysa goobaha ama adeeg bixiyeyaasha fidiyeyaasha si ay u aqoonsadaan shabakadaada iyo qabashada oo aad xasuusato macluumaadka qaarkood.
Haddii aad doorbideyso, waxaad dooran kartaa inaad kombuyutarkaaga kuugu digto mar kasta oo la soo diro cookie, ama waxaad dooran kartaa inaad iska xirto dhammaan cookies adigoo isticmaalaya goobahaaga browser. Sida shabakadaha badankooda, haddii aad soo celiso cookies-kaaga, qaar ka mid ah adeegyadayadu si fiican uma shaqeyn karaan. Si kastaba ha noqotee, waad sii wadi kartaa amarrada adoo la xiriiraya adeegga macaamiisha.
Fulinta Sharciga Ilaalinta Gaarka ah ee California
Sababtoo ah waxaan qiimeyneyno asturnaantaada waxaan qaadnay taxaddarradii lagama maarmaanka u ahaa si aan u waafaqno Sharciga Ilaalinta Asturnaanta ee California. Sidaa awgeed sidaas uma qaybinayno macluumaadkaaga shakhsiyeed ee dhinacyada dibadda ah iyadoon oggolaan.
Iyadoo qayb ka ah Sharciga Ilaalinta Asturnaanta ee California Online, dhammaan isticmaalayaasha boggayaga ayaa wax ka bedeli kara macluumaadkooda wakhti kasta adigoo galaya gudigooda kantaroolkooda iyo tagista 'Edit Profile'.
Caruurta Privacy Online Protection Act Compliance
Waxaan u hoggaansameynaa shuruudaha COPPA (Xeerka Ilaalinta Ilaalinta Ilaalinta Ilmaha ee Ilmaha), ma ururineyno wax macluumaad ah qof kasta oo ka hooseeya da'da 13 da'da. Boggayaga, badeecooyinka iyo adeegyada ayaa dhammaantood loogu talagalay dadka ugu yaraan da'doodu tahay 18 jir ama ka weyn.
Tani Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah online khuseysaa oo keliya macluumaadka la ururiyay iyada oo loo marayo website-kayaga iyo in aan macluumaad la ururiyey offline.
Fadlan sidoo kale booqo Shuruudaha iyo Xaaladaha qaybta dhiso isticmaalka, afeef, iyo xadeynta ee liability ee xukuma isticmaalka our website at http://www.carlhenryglobal.com/terms-and-conditions
By isticmaalaya our site, aad ogolaato in la sharciyada macluumaadka gaarka ah.
Isbedelada Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah our
Haddii aan go'aansano inaan bedelno siyaasadeena asturnaanta, waxaanu kuugu soo diri doonaa isbeddelada ku yaala boggan, iyo / ama cusbooneysiinta taariikhda wax ka beddelka Siyaasadda Khaaska ah ee hoos ku xusan.
Nidaamkani waxaa dib loo habeeyey 25 / 03 / 2018